Takhaatiirta Dhimirka Oo Aaminsan In M/weyneha USA U Saaran Yahay Jidka Weyn Ee Waalida Dhar-dhigashada Iyo Trump Oo Is-Moodsiinaaya
Dr Lee oo ah dhaqtar xagga dhimirka ku taqasusay oo ka hawlgala jaamacadda Yale ayaa koox xildhibaano dimoqoraadi ah u sheegay in Trump uu waali maryaha dhigan-doono.
Waxaana mooshin ka geyn kara madaxweyne ku xigeenka iyo aqlabiyadda golaha wasiiradda, taas oo hadda aysan muuqanin suurto-galnimadeeda, balse codadka ka dhanka ah Trump ayaa aad usoo kordhaya.
Madaxweynayaal hore ayaa waxaa haleelay xaalado caafimaad, waxaana ka mid ah madaxweyne Abraham Lincoln, iyo madaxweyne Ronald Reagan oo la sheegay in uu wareeray, islamarkaasna uusan kala garan-jirin halka uu markaas ku suganyahay mararka qaarkood . Shan sano kadib markii uu xafiiska ka tagay ayaa Reagan laga heley xanuunka dhimirka oo loo yaqaano Alzheimer ama hilmaamka.
Waxaase la sheegay in marka Trump uu is-moodsiinayo waxyaabaha qaar, islamarkaasna ku hanjabayo in uu amro weerar hubka Nuyuukleerka ah in dhaqaatiirta loo ogolaado in ay samayn karaan qiimeyn guud iyaga oo aanan isaga baarin.
Todobaadka dambe, madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu maro baaritaankii ugu horeeyay oo caafimaad oo xagga maskaxda ah tan iyo intii uu xilk